माफ गर्नुस्, मेरो पिउने बानी छैन :: Setopati
कमला अधिकारी मंसिर १७
'के ल्याउँछस् र खै? पैसो छैन होला? तलाईं ल्याउनै मन लागे चप्पलको तुना ल्याइदे न त। खुट्टामा कटुसको काँडा बिझेर जमिनमा टेक्नै भाको छैन,' आमाको निर्दोष आग्रह फोनमा सुनेपछि गौरवको मन ढक्क फुल्यो।
मुटुमा गाँठो पर्‍यो। आखाबाट आँसु बरबरी झर्न थाल्यो। एकछिन त बोल्नै सकेन। एकछिन पछि केही नभएजगरी आमासँग लाडिँदै सोध्यो, 'ल बुढी, किन तुना मात्रै, चप्पल नै ल्याइदिन्छु नि। तपाईंको छोरो त अब बोर्डिङको हेडमास्टर पो त।'
'त्यसो होइन बाबु, चप्पल चुँडिएको होइन नि, तुना मात्रै हो। चोट जहाँ लाग्छ उपचार त्यहीँ मात्रै गर्नु बेस हुन्छ। किन फजुल खर्च गर्छस्। तेरो समस्या मलाई सबै थाहा छ। तेरी आमा हुँ नि,' मर्दका नयन आँसु झार्न अलि असहज मान्छन्। कोठामा एक्लो गौरव छाती समाएर आफ्नो सिरानी भिजाउँछ।
गाउँबाट पढ्न भनेर सहर पसेको गौरवले भर्खरै मात्र एमएससी सकाएको छ। शिक्षक बन्न अलि राम्रा स्कुलले अनुभव खोज्छन्। त्यसैले पढाइ राम्रै भए पनि भनेजस्तो स्कुलमा जागिर पाउन अलि समस्या भयो।
डेराको कोठा नियाल्दै आफ्ना अतीत सम्झिन्छ ऊ। स्टोभ बाल्दा राघिएको त्यो कालो भित्तो, हातले छुँदा चिपचिप लाग्ने, आमाले घरको पाठो बेचेर पठाएको तीन हजार रुपैयाँले आफूले बिताएको आधा वर्ष। कहिले खाएर, कहिले यसै निदाएर।
साथीहरू कलेजको गाडीमा कुद्थे। ऊ सोलभित्र गिटी पस्ने जुत्ता लतार्दै हिँड्थ्यो। कलेज पुग्दा साथीहरू परफ्युमको बासना उडाउँथे। तर ऊ लामो हिँडाइपछि फुस्स गनाएको पसिना लिएर छेउको बेञ्चमा अलग्गै बस्थ्यो।
यतिबेला स्मृतिको गर्तमा पुरिएर बसेका अनेक सम्झना साकार भएर आँखा अघिल्तिर नाच्न थालेका थिए।
विज्ञान पढे पनि किताब किन्ने पैसा अभाव भएर कहिले कुन साथीको, कहिले कुनको पालैपालो मागेर रातभरि पढेर फिर्ता गर्थ्यो। यसैकारण गर्दा कक्षामा सबभन्दा अगाडि प्रश्नको समाधान गर्न सक्षम हुन्थ्यो। मास्टर्स डिग्रीको प्रथम वर्षमा सर्वोत्कृष्ट अंक ल्याएकाले कलेजले उसको पढाइ निःशुल्क गरिदिने भयो। यो खबर पाउँदा उसले आकाशै चुमेजस्तो महसुस गर्‍यो। कलेजको यो निर्णयले उसलाई पढ्न थप प्रेरणा मिलेको थियो।
यी यादसँगै पोको परेर बसेको सम्झनाका थैली बिस्तारै खुल्दै जान थाले।
उसको कोठामा रातभरि बत्ती बलेको देखेर रिसाएका घरबेटी बाले बिजुलीको शुल्क दोब्बर मागे। तिर्ने पैसा नभएर कक्षाको बेन्चमै घोप्टिएर बिताएको त्यो अनौठो रात उसले कसरी भुल्न सक्थयो र !
दिउँसो किताब र झोलाको बोझ थेग्ने बेन्चले त्यो रात गौरवको बोझिलो टाउको अड्याएको थियो। निदाउन खोज्यो, सकेन। खुट्टा करकरी खायो। घण्टौं जोतिएर काम गरेजस्तो जीउ बिछट्टै दुख्न थाल्यो। बिहानीपख मन्द हावाको स्पर्शसँगै यसो परेला जोडिन मात्र लागेका थिए, उसको निद्रा एउटा सपनामा सयर गर्न पुग्यो।
...आफ्नै घरको आँगनको डिल। डिलमा ढकमक्क फुलेका राता गुलाब। ऊ उकालो बाटो चढ्दै थियो। आँगन जोडिएको तल्लो गराबाट माथि उक्लिनै लाग्दा उसको खुट्टा चिप्लियो। हातले कसो गुलाबको हाँगामा समात्न पुगेछ। हत्केलालाई गुलाबको काँडोले चिथोर्‍यो। हात क्षणभरमै रगताम्मे भयो। यस्तो अवस्थामा गौरवलाई देखेर उसकी आमा अत्तालिदै 'गौरव गौरव' भन्दै चिच्याउँदै आइन्...
आँखा खोली हेरेको त उसको अगाडि सुरक्षा उभिएर उसलाई बोलाइराखेकी रहिछे, 'ओइ गौरव।'
'तिमी त रातभरि यहीँ बस्यौ कि क्या हो? कि आज मभन्दा पहिला आइपुगेका हौ?'
गौरवले टाउको हल्लाउँछ, 'अँ हो आज म यहीँ बसेको।'
'ल तिमी होसमा त छौ? कि नशामा?'
'म होसमा छु सुरक्षा। मेरो नशा त गरिबी हो। म यसलाई छोड्न खोज्छु तर मेरो पिछा गरिरहन्छ। अनि कहिले मलाई मर्नु न बाँच्नु बनाउँछ। मेरो पढ्ने रहर, शिक्षक बन्ने रहर छ। मेरो रहरको गहिराइमा यो गरिबी एक मात बनेर अल्झिरहन्छ। मेरी आमाको फुटेका गोडामा काँडा बनेर घोचिरहन्छ। कस्तो गरिबी हो यो? यसलाई मेरो नशा लागेको छ भनुँ या मलाई यसको नशा?'
सुरक्षा अचम्म मानेर उसको उजाडिएको मुहार नियाल्छे। सुखबाहेक अरू अनुभव गर्न नपाएकी, सरल सुरक्षा गौरवको लगनशीलताको उच्च सम्मान गर्थी। धेरै पटक किताब दिएर सहयोग गरेकी थिई।
दिन बित्दै गए। सुरक्षा गौरवको नजिककी साथी बनेर सुखदुःखमा साथ दिन थाली। सुरक्षाले आफ्नो पकेट खर्च बचाएर गौरवको अति आवश्यक गर्जो टार्ने कोशिस गर्थी। सम्बन्धको डोरीमा पयो थपिँदै जान थाल्यो।
सुरक्षाले गौरवकाबारे आफ्नो बाबासँग कुरा गर्छे। यो कुराले हठी उनका बाबा रिसले मुर्मरिँदै भन्छन्, 'यस्ता त कति भेटिन्छन् कति। माया-प्रिती भन्ने फिल्म, उपन्यासमा मात्र सुहाउने कुरा हो छोरी। मायाजालमा फसाउन मान्छेले अनेक गर्छ। धनमा आँखा गाड्नेले पहिला मनको व्यापार गर्छन्। त्योसँग सम्बन्ध नराख्नू, दूरी बढाउनू। समयमै बुद्धि पुर्‍याउनू है छोरी।'
सुरक्षाले बाबाको कुरा काट्न सक्थिन। लुसुक्क कोठामा पस्छे। अनि गौरवले पढेर फिर्ता गरेको किताब पल्टाउँछे। किताबक बीचमा उसले एउटी वृद्ध महिलाको फोटो भेट्छे। निधारमा बसेका लामा–लामा रेखा, मुस्कुराउन नमानेका ओठ, नमिल्दोगरी बाँधिएको पटुकी, चुँडिएको तुनामा धागो राखेर खुट्टामा लगाइएको चप्पल, टाउकोमा सेतो ढाकाको सानो पछ्यौरी। न निधारमा टीका न गुलाब जसरी सजाउने ओठमा लाली।
भोलिपल्ट क्याम्पसमा सुरक्षाले गौरवलाई भेटेर तस्वीर थमाउँदै भन्छे, 'गौरव यो को हो नि?'
'मेरो आमा,' छिटो–छिटो तस्वीर हातमा लिएर आफ्नो ब्यागभित्र राख्छ। अनि लुरूलुरू आफ्नो बाटो लाग्छ।
सुरक्षा आफ्नो बाबासँग कारमा बसेर घरतिर हुइँकिँदै थिई। टन्टलापुरे घाम। तातेको सडक। पेटीमा परिचित व्यक्ति (गौरव) घामले गलाएको निन्याउरो अनुहार लिएर लुरुलुरु हिँडिरहेको थियो। बाबा साथमै भएकाले नदेखे जस्तोगरी हिँड्नु पर्‍यो सुरक्षालाई।
दिन बित्दै गए। कलेजको अन्तिम दिन। 'ग्यादरिङ' को कुरा उठ्यो। गौरवको गोजी रित्तो थियो। उसको समस्या बुझ्ने सुरक्षा बाहेक कोही थिएनन्। गौरवलाई सहयोग गर्न हरबखत मौका कुरिरहने सुरक्षालाई यति बेला भने अलि अप्ठ्यारो पर्‍यो।
सुरक्षालाई गौरवको स्वाभिमानमा चोट पुर्‍याउन पनि त मन थिएन। उसले गौरवका साथी प्रेमसँग कुरा गरी।
'प्रेम, गौरवको समस्या मैले बुझेकी छु। उसँग पैसा छैन। त्यही भएर सामेल हुन गाह्रो मानेको छ। यो पैसा लिऊ र गौरवलाई देऊ है। तिमी आफैंले सापटी दिएको भन नि फेरि।'
भोलिपल्ट सबैको रमाइलो जमघट हुन्छ। गौरव पछाडिको टेबलमा एक्लै थियो।
सबैले 'सुरक्षा आइनन् कि क्या हो?' भनेर गलल्ल हाँस्छन्। गौरव अलि अप्ठ्यारो लागेजस्तो गर्छ। सबैले मस्ति गरे तर गौरवलाई पानी पनि मुखमा राख्न मन लागेन। ऊ सुरक्षाको बाटो हेरिरह्यो। ऊ आइन। गौरव गेटैनेरको ढोकाबाट लुसुक्क बाहिर निस्कन लागेको थियो, पछाडिबाट हात राख्दै प्रेमले भन्छ, 'अरे गौरव सुरक्षा आइनन् त के भो? हामी पनि त तिम्रै साथी हो नि। भित्र हिँड ल यो बियर चियर्स गर्नुपर्छ। आज कलेजको अन्तिम दिन।'
'माफ गर, मेरो पिउने बानी छैन।'
'अरे अलि अलि पिउन नजाने के मर्द यार? जीवन आनन्दले जीउन त हल्का पिउनै पर्छ।'
'माफ गर्नुस् साथी, जीवन जिउने आफ्नो–आफ्नो कला हुन्छ। तपाईंलाई पिउने जिन्दगी आनन्द मलाई नपिएरै आनन्द।'
यस्तै–यस्तै कुरा हुँदै थियो, फोनको घण्टी बज्छ, नचिनेको नम्बर। गौरवले फोन उठाउँछ।
'गौरव सञ्चै छौ? मलाई चिन्यौ?' त्यो बहुप्रतिक्षित आवाजले कानमा स्पर्श गरेपछि गौरवको मन हलुँगो भयो।
दायाँ बायाँ नजर डुलाउँदै ऊ त्यहाँबाट उठ्यो। अरू साथीबाट ओझेल परेर कुरा गर्न थाल्यो।
'सुरक्षा तिमी कहाँ छौ? मलाई एक्लै छाडेर ग्यादरिङमा तिमी आफू कहाँ हरायौ?'
'बाबाले गाली गर्नुभयो। छोरी मान्छे यस्तो भीडभाडमा जानु हुँदैन भनेर। सुनन मेरो घरमा बिहेको कुरा चल्दैछ।'
गौरव झस्कियो। सुरक्षा आफ्नै भइसकेको जस्तो महसुस गरेको गौरवलाई यो कुरा विश्वास गर्नै गाह्रो भयो।
सुरक्षा बिनाको समय उसका लागि कुहिरोमा रूमल्लिएर आकुलव्याकुल भएको कागको हालत जस्तै हुन्थ्यो।
'हैन, म सुरक्षाको घरमै गएर कुरा गर्छु। शिक्षक छँदैछु, जेनतेन एउटा परिवार पाल्न सकुँला। ढिलो गरे पछुतो आफैलाई हुने हो,' यस्तै सोचेर गौरव सुरक्षाको घर गयो।
गौरवलाई देखेर सुरक्षा अति नै खुसी भई। जे सोचेर गौरव सुरक्षाको घर गएको थियो परिणाम उल्टो भइदियो। उसले सुरक्षाको बाबाबाट अहिलेसम्मकै घिनलाग्दो व्यवहार सहनुपर्‍यो। व्यक्तिको मात्रै होइन पेसाको समेत अपमान गर्न कहीँ बाँकी राखेनन् सुरक्षाका बाबाले।
गौरवलाई छातीमा चारैतिबाट बाण हानेजस्तै भयो। ऊ चुपचाप सुरक्षाको आँखामा हेरिरह्यो अनि घरबाट निस्कियो।
आफ्नो बाबाको दुर्व्यवहारबाट विक्षिप्त गौरवलाई सहानुभूति दिन सुरक्षाले कयौंपटक सम्पर्क गर्ने प्रयास गरी। असफल भई।
पढाइ सकिएपछि घरमा केही नगरी खाली कति बसिराख्नु? सुरक्षा जागिर खोज्दै हिँडी। एमएससी गरेकी सुरक्षाले लामो संघर्षपछि एउटा बोर्डिङ स्कुलमा जागिर पाई।
उसको स्कुलको पहिलो दिन सबैले प्रिन्सिपलको गुनगान गाएका थिए- 'कति भलादमी, सक्षम, हकी, केहीको लत नबसेको, मिहिनेती, स्टाफसँग एकदमै सरल व्यवहार गर्ने प्रिन्सिपल।'
सुरक्षा प्रिन्सिपललाई भेट्न आतुर थिई। तर प्रिन्सिपल केही समयका लागि बेलायत गएका थिए।
एकदिन सुरक्षाकी दिदी जीना रूँदै माइत आई। जीना बलिन्द्र धारा आँसु चुहाउँदै आफ्नो बाबासँग बह पोख्छे।
'बाबा म त्यो मान्छेसँग बस्न सक्दिनँ। धन सम्पत्ति सबैथोक होइन। एउटा खुसी किन्न नसक्ने त्यो धन मलाई चाहिँदैन। धनाढ्य हुँ भन्दैमा जे गरे पनि हुने, सबै बनावटी पैसाले किनेको खोक्रो सुन्दरताले मानिस खुसी रहन सक्दैन। मेरो भविष्य त डामाडोल र नारकीय बनाइदिनुभयो।'
जीना लगातार भन्छे,' बहिनीको जीवन यस्तो नबनाइदिनुहोला। म पनि यहीँ बस्छु बाबा। आफैं केही गर्छु। मिल्दैन भन्नुहुन्छ भने म यो माइतीको आँगन कहिल्यै टेक्दिन।'
सुरक्षाका बाबा रातभरी सोच्न थाल्छन्, 'कतै मैले धनको आडम्बरी भएर त्यो मास्टरमाथि अपराध त गरिनँ?'
गौरवलाई सम्झिँदै मनमा कुरा खेलाउँछन्, 'सुरक्षाको मनमा के छ एकपटक पनि नसोधी मैले उसलाई यस्तो निच व्यवहार गरेँ। जिन्दगी आ–आफ्नो। जसरी मन लाग्छ त्यसरी जिउन पाउनुपर्छ। निर्णय गर्ने अधिकार पनि उनीहरूकै छ। जीनाले भनेको ठीकै हो। पैसाले किन्न सक्ने भए मैले उसकी आमालाई नै सारा सम्पत्ति रित्याएर ल्याउने थिएँ...'
यस्तो सोच्दा सोच्दै बिहान हुन्छ। सुरक्षा स्कुल जाने तरखरमा हुन्छे। सुरक्षाको नजिकै गएर बाबाले भन्छन्, 'सुरक्षा तिमीलाई गौरव मन पर्छ हो? नढाँटी भन।'
सुरक्षा आँसु झार्दै भन्छे, 'मनपर्ने मात्र होइन बाबा म उसलाई धेरै माया गर्छु। तर अब उसँग मेरो कहिल्यै मिलन हुँदैन। हजुरले उमाथि घिनलाग्दो व्यवहार गर्नुभयो। म लाचार छु।'
'उसको नम्बर देऊ म कल गर्छु,' बाबाले गौरवलाई फोन गर्छन्।
'बाबु गौरव ! सञ्चै छौ? म सुरक्षाको बाबा बोलेको। मलाई माफ गरिदेऊ बाबु। मैले तिम्रो चित्त दुखाएँ। बल्ल मेरा आँखा खुले। अहिले आएर सुरक्षाको हात तिम्रो हातमा थमाउन पाए मलाई पूण्य मिल्थ्यो भन्ने आश लागेको छ।'
फोन यसै काटेर गौरव मनमनै सोच्छ, 'एक पिताले आफ्नो छोरीको राम्रो जीवनका लागि मरिमेटेर उनीहरूको वरिपरि घुमिरहनु, आफ्नो सन्तानको सदा सर्वदा भलो चाहनु, स्वाभाविक हो।'
सुरक्षा निरश भएर स्कुल पुग्छे। पियन दाइले आज मिटिङ बस्ने सुनाउँछन्। बेलायत गएका प्रिन्सिपल आइसकेछन्। सुरक्षाले सोची आज भेट हुने भयो।
'सर नमस्कार !' सबैजनाको मुखबाट एकैचोटी आवाज फुत्त निस्कियो। सुरक्षा अचम्म मान्छे। आँखाले धोका खाए कि भन्ठानेर दुई-तीन पटकसम्म आँखा मिच्छे।
त्यो अविश्वसनीय दृष्य प्रिन्सिपलको उपस्थिति थियो। प्रिन्सिपल, गौरव, जसलाई सुरक्षा निकै माया गर्थी। उनीहरूको आँखा जुध्छ। मुस्कुराउँछन्। घर गएपछि यो सबै वृत्तान्त सुरक्षाले आफ्नो बाबालाई सुनाउँछे। सुरक्षाको बाबाले गौरवलाई रातको खाना खानेगरी घरै बोलाउँछन्।
गौरव बसेको टेबलमा वाइनले भरिएको गिलास आउँछ। सुरक्षाको बाबाले 'चियर्स गौरव!' भन्छन्।
उसको आँखामा हेर्दै एक चुस्की लिन्छन्। तर गौरव वाइनको गिलास पर सार्दै भन्छ।
'माफ गर्नुस्, मेरो पिउने बानी छैन।'
सुरक्षाको बाबा मुस्कुराउँदै भन्छन्, 'मास्टर साब, सुरक्षासँग बिहे पक्का गरौं क्यारे।'
प्रकाशित मिति: बुधबार, मंसिर १७, २०७७, १४:३५:००